Guriyeynta xaaladaha deg-degga
Bogga Infopankki Ammaanka shaqo la’aanta waxaad ka heleysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qofka xaqa u leh ammaanka shaqo la’aanta. Nidaamka hawlgabka Finland macluumaad ku saabsan waxaad ka heleysaa bogga Infopankki Hawlgab.
Sharciga ayaa lagu qeexay maalmooyinka Kelada sababaha lagu bixiyo. Qeyb ka ahaanshada ammaanka bulshada Finland waa in gooni loo codsadaa. Sidoo kale kaalmo kastana waa in goonideeda loo codsadaa. Marka ay Keladu go’aamineyso kaalmo, codsada kasta waxaa si shaqsi ah looga baaraandegayaa xaaladdiisa nololeed.
Keladu mas’uul kama ah adeegyada caafimaadka iyo adeegyada bulshada ee ay degmooyinku mas’uul ka yihiin. Shaqsiyaadka caafimaadkooda lagu caymiyay Finland waxay Keladu siisaa kaarka Kelada. Haddii aad Finland ku leedahay guri-degmo waxaad xaq u leedahay daryeelka caafimaadka ee rugaha daryeelka caafimaadka shacabka inkastoo aadan heysan kaarka Kelada.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xuquuqda degmadaada waxaad ka heleysaa bogga Infopankki Guri-degmo Finland.
Macluumaad ku saabsan ammaanka bulshada FinnishkaIngiriis
Ka mid ahaanshaha ammaanka bulshada Finland
Xeerka ugu horeeya waa in aad Finland si joogto ah u deggan tahay, waxaad qeyb ka tahay ammaanka bulshada Finland waadna heli kartaa manfacyada Kelada. Sharciga ayaa qeexaya waxa loola jeedo joogto u degananaashaha.
Sidoo kale ka shaqeynta Finland ayaa ku keeni kartaa adiga xeyndaabka ammaanka bulshada Finland.
Ma ku jirtaa ammaanka bulshada Finland oo ma heshaa kaalmooyin? Arrinta waxaa saameyn ku leh, inaad uga soo guureyso
wadan Midowga Yurub (EU) ka tirsan ama wadan ka tirsan Soonaha dhaqaalaha Yurub (ETA) ama Switzerland ama
wadan ay Finland wada leeyihiin heshiiska ammaanka bulshada.
Waxa kale oo intaas dheer oo saameyn ku leh ka mid ahaanshaha ammaanka bulshada iyo helitaanka kaalmooyinka inaad Finland u soo guurtay tusaale ahaan
Finland waxay heshiis saameeya ammaanka bulshada la gashay dalal. Wadamadaas waxay yihiin wadamada Waqooyiga ama Nordikada (Sweden, Danmark, Norway iyo Iceland), Mareykanka, Kanada iyo Quebec, Chile, Israa’iil, Hindiya iyo Austraaliya. Heshiiyadu waxay saameeyaan ugu dhowaan hawlgabka. Heshiisyada qaarkood waxaa kale oo ay saameeyaan daryeelka caafimaadka. Haddii aad ka timaado dalalkaas midkood Kelada ka hubso in heshiisyadu saameyn ku yeelanayaan ammaankaada bulsho.
Marka aad Finland u soo guurto, Kelada ayaa qiimeyneysa markasta inaad Finland ugu soo guurtay degis joogto ah oo waafaqsan sharciga ammaanka bulshada.
Waxaa wannaagsan in la ogaado in joogto u deganaanshaha sharciyo kala duduwan loogu qeexay habab kala duduwan. Halkan waxaan uga hadleynaa sharciyada ammaanka bulshada.
Haddii aan loo arag in aad Finland joogto ugu soo guurtay, waxaad xaq u yeelan kareysaa inaad qeyb ahaan gasho ammaanka bulshada shaqadaada darteed.
waxaad heysataa heshiis shaqo ah ama wax u dhigma oo aad Finland ku sameyneyso
Waxaa kale oo inta badan la doonayaa in ogolaanshaha joogitaanka ugu yaraan sanad laguu ogolaaday haddii ay waajib kugu tahay inaad qaadato ogolaanshaha joogitaanka.
Haddii aad Finland si ku meelgaar ah ugu soo guurtay inta badan xaq uma lihid ammaanka bulshada Finland. Tusaale ahaan ardaygu Finland ku joogaa si ku meelgaar ah haddii sababta joogista dalku ay tahay uun waxbarasho.
Marka la sameeyo go’aanka ah inaad joogto u deggan tahay Finland waxaa laguu aqoonsanayaa qof Finland joogto u deggan ilaa aad:
Haddiise aad shaqo ka bilowdo wadan kale ama aad dibadda sanad wax ka badan ku maqnaato xaqaadi ammaanka bulshada Finland wuxuu dhammaan karaa. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xaaladan waxaad ka heleysaa Kelada.
Waxaa kale oo jiro kaalmooyin kale oo aadan heli karin haddii aadan Finland hadda ama horay ugu deganeyn joogto. Tusaale ahaan lacag maalmeedka waalidka ayaa waalidku heli karaan oo kaliya haddii ay deganaayeen Finland 180 maalmood kahor waqtiga loo qabtay dhalashada cunugga. Haddii aad ka timid wadan kale oo Midowga Yurub ka tirsan waxaad xaaladaha qaarkood uga faa’iideysan kartaa inta aad ku jirto xilliga caymiskaada ee kuugu uruuriya wadan kale oo Midowga Yurub ka tirsan. Weydii Kelada faahfaahin dheeraad ah.
Haddii aad Finland uga soo guureyso shaqo darteed soonaha Midowga Yurub ama wadanka kale oo ETA ah ama Switzerland, waxaad inta badan mudada xiriirkaada shaqada geleysaa haddii aad xittaa heysato heshiis shaqo oo waqti gaaban ah.
Haddii shaqada u timid wax ka yar 4 bilood, waxaad xaq u yeelan kartaa kaalmada guri ku xannaaneynta carruurta iyo daryeelka caafimaadka bulshada.
Haddii heshiiska shaqadaadu gaareyso 4 billood ama wax kabadan, waxaad ku jirtaa intaas aad shqeyneyso ceymiska bulshada Finland
Haddii Finland uga imaaneyso meel kale oo aan aheyn Midowga Yurub, soonaha ETA iyo Switzerland shaqo darteed arrimaha soo socda ayaa saameyn ku leh ammaankaada bulshada:
inta ay shaqadu qaadaneyso
wadanka aad Finland uga soo guureyso
Inta badan manfacyada Keladu waa kuwa aad xaq u leedahay uun marka aad Finland joogto ugu soo guurto si rasmi ah ama haddii heshiiska shaqadaadu tahay ugu yaraan 4 billood . Waxa intaas dheer inaad buuxiso shuruudaha ku xiran helitaanka manfacyada ee looga baahan yahay dadka kale ee deggan Finland.
Haddii aadan joogto ugu soo guurin Finland waxa aad ku ceymistan tahay oo keliya inta aad shaqeyneyso. Shaqaduna waa iney ahaataa mid ugu yaraan 4 billood soconeysa. Waqtiga aad shaqeyneyso iyo mushaarkuna iney ahaadaan kuwo kugu filan. Waxaa intaa dheer ood u baahan tahay sharci degenaansho, kaasoo wata shatiga ogolaanshaha shaqada
Waqtiga shaqada ee ugu yarna waa 18 saacadood todobaadkii. Mushaarku waa in uu noqdaa mid waafaqsan shuraadda heshiiska shaqada ama haddii shaqadaas aysan laheyn ugu yaraan bishii 1189 yuuro (xaaladda sanadki 2018).
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 23.07.2018 Boggan war-celin ka soo dir
Marka hore dooro soonaha. Marka aad soonaha doorato, waxaad arkeysaa isku-xiraha bogagga Infopankki ee soonaha.
Haddii aad tahay shaqaale, shirkadle, arday, dib u soo guure, qaxooti, magangelyo doon ama xubinta qoyska ee qofka deggan Finland, waxaad bogagan Infopankki ka heleysaa macluumaad si gaar ah ugu haboon xaaladaada nololeed. Adigoo bogagan u sii maraya waxaad macluumaadyada aad u baahan tahay ku heleysaa si degdeg ah oo qaab la soo koobay ah.